WSL paWindows 11 inogona kutorwa pasi sechishandiso kuburikidza neMicrosoft Store | Linux Vakapindwa muropa
WSL muWindows 11 inogona kutorwa pasi sechishandiso kuburikidza neMicrosoft Store
Microsoft ichangobva kuzivisa kuwanikwa kweWindows 11 ye nharaunda WSL (Windows Subsystem yeLinux) iyo inomhanya neLinux mafaira anogona. Kusiyana nekutumirwa kweWSL kweshanduro dzekare dzeWindows, iyo vhezheni yeWindows 11 haina kusanganiswa mumufananidzo system, asi iri panzvimbo yakagadzirirwa sechishandiso chakagoverwa kuburikidza neMicrosoft Store.
Panguva imwecheteyo, kubva pakuona kwetekinoroji yakashandiswa, iyo WSL padding yakaramba yakafanana, chete iyo yekuisa uye yekuvandudza nzira yashanduka.
Microsoft inotaura izvozvo izvi hazvisi zvekugadzirisa yeWSL, asi ndiyo imwechete iyo vazhinji vedu atoziva kare uye iyo inouyawo nezvinhu zvitsva zvinogona kuwanikwa mune ino yekutarisa, se:
Mabasa matsva senge wsl.exe -mount, VHD - gomo -vhd (kugonesa kumisikidza mafaira)
File system yekutsvaga yakaitwa.
Tsigiro yesarudzo yekusarudza nzvimbo yekumusoro kana uchisimudza diski kuburikidza neWSL - namewsl -mount
Linux kernel yakagadziridzwa kusvika 5.10.60.1
Wakawedzera chinongedzo chemberi chekubatsira basa iro rinoshandiswa kuratidza Mirira meseji ine animated madhiza munzira yekutendeuka kuratidza vashandisi kuti WSL ichiri kushanda.
Yakachinjirwa kusada nharo. Shanduko iyi inoshanduka kuti isade gakava, asi inochengetedza rutsigiro kudzivirira kutyora magwaro aripo.wsl -install - distributionwsl -install - kugovera
Wakawedzera kuraira kuratidza inoenderana vhezheni ruzivo wsl.exe -version
Inofanira kuonekwa kuti Kugovaniswa kuburikidza neMicrosoft Chitoro zvinogonesa kukurumidza kuendesa ekuvandudzwa uye nyowani dzeWSL maficha, kusanganisira kugona kuisa vhezheni itsva dzeWSL pasina kusungirwa kuWindows vhezheni. Semuenzaniso, kana zviyero zvekuyedza senge Linux graphical application rutsigiro, GPU-side computing, uye kukwirisa dhisiki zvagadzirira, mushandisi anozokwanisa kuzviwana nekukasira, pasina chikonzero chekuvandudza Windows kana kushandisa Windows Insider bvunzo inovaka.
Shanduko iyi inofambisa iwo mabhinari kubva pakuve chikamu chemufananidzo weWindows kuva chikamu chechishandiso chaunoisa kubva kuChitoro. Izvi zvinogadzirisa WSL kubva pane yako vhezheni yeWindows, ichikubvumidza iwe kugadzirisa kuburikidza neMicrosoft Store. Nekudaro, kana zvinhu zvitsva zvikaita seGII rutsigiro rwekushandisa, GPU komputa, uye Linux faira system yekumisikidza kumisikidza zvakagadziriswa, kuyedzwa, uye kugadzirira kuburitswa, iwe unobva wakwanisa kuwana kwavari pamushini wako pasina kuda kugadzirisa yako yese Windows OS, kana enda kuWindows Insider preview inovaka.
Kune avo vasina kujaira nharaunda yeWSL, vanofanirwa kuziva kuti iri panzvimbo pekubatwa sekunge yaive emulator, ino nharaunda iyo inoshandura Linux system yekufona kuWindows system mafoni, inoshandisa yakazara Linux kernel nharaunda. Iyo kernel yakatsanangurwa yeWSL yakavakirwa paLinux kernel vhezheni 5.10, iyo yakawedzerwa neWSL-yakatarwa zvigamba, kusanganisira optimizization yekudzikisa kernel kutanga nguva, kudzora ndangariro kushandiswa, kudzosa ndangariro dzakasunungurwa nemaitiro kubva kuLinux kuenda kuWindows uye kusiya iwo mashoma anodikanwa seti yevatyairi uye masystems mune kernel.
Iyo kernel inomhanya mune Windows nharaunda ichishandisa muchina chaiwo iyo yatove kumhanya paAzure. Iyo WSL nharaunda inomhanya pane yakasarudzika dhisiki mufananidzo (VHD) ine ext4 faira system uye chaiyo network network adapta.
Mushandisi nzvimbo yezvinhu akaisirwa zvakasiyana uye akavakirwa pane akawanda-marongero magungano. Semuenzaniso, yekumisikidza WSL, dhairekitori reMicrosoft Store rinopa kuvaka kweUbuntu, Debian GNU / Linux, Kali Linux, Fedora, Alpine, SUSE, uye openSUSE.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa ruzivo rwemashoko Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WSL muWindows 11 inogona kutorwa pasi sechishandiso kuburikidza neMicrosoft Store
RHEL 8.5: inopinda chikamu cheBeta nenhau dzinonakidza
Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation iri kunze